Processor-ka 5G ee Mediatek ee mobilada ayaa durba leh taariikh la soo saaray | Androidsis
Mediatek waxay kordhineysaa dadaalkeeda suuqa processor-ka casriga ah. Waa la ogyahay in Qualcomm uu yahay kan ugu weyn uguna adag ee qaybta Chipset-ka isla markaana ay hadheysay iyada, tan iyo intii ay ku sugnaayeen inta badan taleefannada casriga ah ee maanta, iyo sidoo kale kuwa ugu caansan sidoo kale, aan aad loo calaamadeyn.
Huawei, oo leh Kirin, iyo Samsung, iyo Exynos, ayaa sidoo kale nolosha ka yara adkeeyay Mediatek muddooyinkii ugu dambeeyay, iyaga oo dooranaya noocyo u gaar ah oo loo yaqaan 'Chipsets' oo loogu talagalay moodelladooda. Laakiin Mediatek ayaan si doqonnimo ah u istaagin, ugu yaraan ilaa dhowaan, tanna waxaa lagu muujiyay iyada cusub Helio G90, taas oo ay si fiican u heleen dadka isticmaala sababo la xiriira awoodeeda ciyaareed ee weyn, iyo SoC-gaaga xiga ee leh taageerada 5G, taas oo horey u laheyd taariikh rasmi ah oo lagu sii deyn doono.
El 26 bisha November Waa taariikhda aan baran doonno processor-ka cusub ee Mediatek mar iyo dhammaanba. Tani, sidaan soo sheegnay oo ay si rasmi ah u shaacisay shirkadda lafteeda inyar ka hor, waxay yeelan doontaa modem 5G ah oo isku dhafan kaas oo ku dari doona taageerada isku xirnaanta ee la yiraahdo taleefannada casriga ah ee ay ku darsatay hoostiisa.
Sawirada sidan oo kale ah ma duugoobaan - tan yar ee yar @MediaTek square wuxuu awood u yeelan doonaa qalab badan oo soo socda, oo ay ku jiraan mustaqbalka 5G. Faahfaahin dheeri ah ayaa imaan doonta ogeysiiska bisha Noofambar 26!#MediaTekSummit #wax walbo pic.twitter.com/LwJ1jO2Xnt
- Joshua Vergara (@jvtechtea) November 8, 2019
Wax kale lagama yaqaanno astaamaheeda iyo qeexitaankiisa farsamo, laakiin waxaan qiyaasi karnaa inay tahay System-on-Chip oo leh cabbirka horumarsan, siddeed xuddun iyo qaab dhismeed 64-bit ah. Waxaa la sheegay inay noqon doonto 7nm, in si gaar ah loo qeexo, laakiin tani kaliya waa mala awaal, iyo sidoo kale sheegashooyinka ah inay taageero u heli doonto kamaradaha ilaa 80 megapixels oo xalin ah. Si kastaba ha noqotee, lama yaabi doonno haddii dhammaan ama in badan oo ka mid ah xanta iyo rajooyinka sare ee ku xeeran shabakadda la fuliyo, maadaama wax badan laga filayo processor-kan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Mediatek processor-kiisa 5G ee taleefannada gacanta horay ayuu u haystay taariikh la bilaabi doono